Ogaden News Agency (ONA) – Bandhig-faneedkii Oslo iyo Sanca
Bandhig-faneedkii Oslo iyo Sanca
Meela kala duwan oo caalamka ka mid ah ayaa sanadwalba lagu qabtaa Bandhi-faneed ay ku kulmaan dhaqanada kala duwan ee shacabka dalkaasi uu leeyahay ama uu la wadaago dhaqanada kalee caalamka uga yimid. Hadafka ugu weyn marka laga yimaado horumarinta dalxiiska gudaha ah, waa inay isbartaan shacuubta caalamka dhaqan ahaan iyo taariikh ahaan.
Somalida Ogadenya waxay xoogooda soo galeen caalamka gaar ahaan Yurub iyo Waqooyiga Amerika 20kii sanee ugu dambeysay. Maadaama ay yihiin shacab la gumaysto oo qadiyadooda iyo xuquuqdooda u halgamaya waxay xooga saareen mudadaa inay muujiyaan –Aqoonsigooda- oy baraan shucuubta ay la noolyihiin dhaqankooda. Bandhig-faneedyada ayaana ugu horeeya goobaha ay shucuubta isku bartaan ee lagu muujiyo –Qofka aad tahay- iyo –Himilada Shacabkaaga-.
Waxaa aad u soo jiita dadweynaha daawashada u yimaada bandhigyada ay ka qaybgalaan jaaliyadaha S.Ogadenya, bilicda quruxsan iyo hugga ay gabdhaheena iyo dhalin-yaradeena ku labisan yihiin iyo Dhaantada oo noqotay ciyaarta 1aad ee la daawado.
Bal hadda hoos ka daawo sawiradii iyo dhaantadii labada bandhig-faneed ee lagu kala qabtay Sanca iyo Oslo.
Dhaantadii Jaaliyadda Sanca/Yemen ay soo bandhigtay oo meela kala duwan laga soo codsaday mar 2aad waa tan;
Sawiradii Bandhig-faneedkii Jaaliyadda OSLo/Norway halkan ka daawo;